singer - Synonyms of singer | Antonyms of singer | Definition of singer | Example of singer | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for singer
Top 30 analogous words or synonyms for singer
Punk jazz ဂရိ-အမေရိကန်အဆိုတော် Diannanda Galsa သည် jazz ရိုးရာဓလေ့များကို ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ သူမ၏ album "The Singer" သည် punk jazz ပုံစံများပေါင်းစပ်ထားပြီး ပီယာနိုဖျော်
ဟဲဗီးမက်တယ်လ် ဂီတ ၆၀ နောက်ပိုင်းတွင် singer – Arthur Brown ထူးဆန်း၍ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများ စတင်၍ ဖန်တီးခဲ့သည်။ Vanilla Fudge ၏ပထမဆုံး album သည် ၁၉၆၇ တွင် ထွက်လာခဲ့ပြီး psychedelia မှ heavy metal ဖြစ်လာသည့် ပုံစံဟုခေါ်သည်။
Gothic rock ၂၀၀၀ တွင် ဝေဖန်ရေးဆရာ တီးဝိုင်းသစ်များတွင် goth ၏လွှမ်းမိုးမှုကို သတိပြုမိခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်တီးဝိုင်း Horrors ၁၉၆၀ garage rock နှင့် ၁၉၈၀ goth တို့ကို ရောနှောခဲ့သည်။ fashion ဝေါဟာရအရ gothic တီးဝိုင်းများ horror films နှင့်အတူ ၁၉ရာစု gothic စာပေ၏ လွှမ်းမိုးမှုများနှင့် ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ gothic fashion များသည် deathrock, punk, androgynous, Victorian မှ သီးခြားယဉ်ကျေးမှုကို အစီအစဉ်အတိုင်း စီစဉ်ထားသည်။ Renaissance နှင့် medieval ခေတ်ပုံစံ ယဉ်ကျေးမှု အဝတ်အစားနှင့် မကြာခဏ အနက်ရောင် အဝတ်အစားများ make up နှင့် ဆံပင်များပါဝင်သည်။ Gothic singer များသည် ၁၉၈၀တွင် သူတို့၏ ဆံပင်များကိုကောက်လှည့်ရှိသည်။
Britpop Blur သည် shoegazing နှင့် baggy ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ရောနှောခဲ့သည်။ သူတို့၏ ဒုတိယ album Modern Life is Rubbish (၁၉၉၃)တွင် ဗြိတိန်သုခမမူဟန်ကို တွေ့ရှိရသည်။ Blur တီးဝိုင်းသည် ၁၉၉၂နွေဦးတွင် အမေရိကန်၌ သူတို့၏ tour ကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ထို tourတွင် blurမှ Lead singer Damon Abarn က အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုကို နာကျဉ်းစေရန် ပြောကြားခဲ့သည်။ Suedeနှင့် Elastica မှ leader Justine Frishmannသည် လူတွေက အမေရိကန်ဂီတကို အလွန်စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ဗြိတိန်နှင့် ပတ်သက်၍ အများသိအောင် ကြေညာသင့်ပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
Groove metal ၁၉၉၀ခုနှစ်တွင်ထွက်ရှိခဲ့သော Pantera ၏ "Cowboys from Hell" album groove metal အမျိုးအစားသည် groundbreaking နှင့် blueprint-defining ဖွဲ့ဆိုနိုင်သည်။ Ian Christe သည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်အတောအတွင်း Sepultura ၏ Chaos ADနှင့် Pantera တို့သည် groove metal သည် နောက်ပိုင်းအဖွဲ့များတွင် လွှမ်းမိုးခြင်းမှ death metal ဆင်းသက်လာခြင်းကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ Exhorder ၏ ၁၉၉၀ တွင် ထွက်ရှိခဲ့သော ပထမဆုံး album "Slaughter in the Vatican album" သည် ပထမဆုံး groove metal album များထဲမှ တစ်ခုဟု ယူဆနိုင်သည်။ groove metal တီး ဝိုင်းများသည် thrash metal နှင့် crossover thrash တို့နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ Prong တီးဝိုင်းမှ lead singer နှင့် ဂီတသမား Tommy Victor က groove metal သည် Bad Brains မှ လာခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
ဂျွန်အွန်ဂျီ ဂျွန်အွန်ဂျီကို ဟွှန်းဒေးခရိုင် (Haeundae)၊ ဘူဆန်မြို့၌ ဩဂုတ်လ ၁၈ ရက်၊ ၁၉၉၃တွင် ဂျွန်ဟေးရန်အဖြစ် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဟပ်ဒို (Hapdo) သူငယ်တန်းကျောင်း၊ ရှင်ဂျေး (Shinjae) မူလတန်းကျောင်း၊ ဂျေးစောင် (Jaesong) မိန်းကလေးအလယ်တန်းကျောင်းနှင့် ဟေးဝှာ (Hyehwa) မိန်းကလေးအထက်တန်းကျောင်းတို့တွင် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ မှာတော့ ဂျွန်ဟာ ကေဘီအက်စ် (KBS) ရုပ်သံလိုင်းက ကြီးမှုးကျင်းပတဲ့ "Exciting Day Enjoyable Day" () (စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နေ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့) အစီအစဉ်မှာ ပထမဆု ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။ In November 2010, Jung passed the auditions to become the main singer of Apink. She had not received any professional training prior to joining Apink, and had trained for only two months with the group.
Industrial rock အချို့ post-punk ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူများသည် ပုံစံများ industrial music နှင့်ယှဉ်၍ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ Pere Ubu ၏ပွဲဦးထွက် album "The Modern Dance" ကို industrial ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှ Chrome နှင့် Jimi Hendrix နှင့် The Sex Pistol တို့သည် tape music ကို လက်တွေ့ စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဂီတာဂျာနယ်လစ် Simon Rynold သည် Killing Joke ကို heavy metal ၏ post-punk version ဟု ယူဆခဲ့သည်။ New York city တီးဝိုင်း Swans သည် No Wave အဖြစ်အပျက်ကို လှုံဆော်ခဲ့သည်။ punk rock, noise music (အထူးသဖြင့် Whitehouse) နှင့် Original Industrial အုပ်စုများလည်း ပါဝင်သည်။ Big Black မှ Singer Steve Albin သည် American hardcore punk ကို ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ Big Black သည် industrial music ကိုအားသာသော်လည်း post-hardcore နှင့် noise rock တို့ကိုဆက်နွယ်ခဲ့သည်။ ဆွစ်ဇာလန်တီးဝိုင်း The Young Gods တီးဝိုင်းသည် hardcore နှင့် industrial မှ စိတ်ကူးညဏ်ကွန်မြူးမှုများ ယူသုံးခဲ့သည်။
ကယ်လ်ဗင် ဟဲရစ် On 24 June 2016, Harris releasedacollaboration with Dizzee Rascal, titled "Hype". On 8 July 2016, John Newman released the track "Olé", which was produced by Harris. On September 16, 2016, Harris released "My Way", where he also performed vocals for the song. On 21 February 2017, he announced the song "Slide", his collaboration with American singer-songwriter Frank Ocean and hip-hop group Migos. The song was released on 25 February 2017. The following month, Harris announcedasong titled "Amenity", his collaboration with Dua Lipa.